hoo!haa!! – Page 15 –
EGWU DỊ N’ABUJA!!!
Egwu ji ndi nọ n’ime Abuja ugbua maka ngagharị nke ndi ụka Alakụba ngalaba nke akpọrọ shiite chọrọ ime iji gosi na ha chọrọ ka-ahapụ onye isi ha bụ Ibrahim El-Zakzaky na nwunye ya eji eji. Malite ụnyahụ bụ Tọsdee ka-ebidoro na-ezipu ozi n’ọba ozi dị iche iche dika Whatsapp,Read More →
Ndi na-agba mbọ maka Biafra inwere onwe ha, akpọrọ Movement for Actualization of the Sovereign State of Biafra, MASSOB n’aha nkenke, nke ọ bụ Uchenna Madụ nọ n’isi ụgbọ ya, nọrọ na Wenesdee gara aga kwue na ka-esi were ike buru mkpọ-ikikere ndi ụlọ omebe iwu ala anyị ngalaba nkeRead More →
SULTAN NKE SOKOTO ENYELA NDI NCHỊ EHI ỌNWA ABỤỌ IJI CHỌPỤTA NDI NA-EGBU NDI MMADỤ NA NAIJIRIYA
Onye isi ndi ụka Alakụba n’ala anyị niile, bụ Muhammad Sa’ad Abubakar, Sultan nke Sokoto enyela ndị nche ehi akpọrọ Miyetti Allah Cattle Breeders’ Association nke Naijiriya, (MACBAN), iwu, ka ha jiri ọnwa abụọ chọpụta ndi nche ehi na-egbu ndi mmadụ na obodoa bụ Naijiriya. Onye Sultan a nyere iwuaRead More →
NNUKWU ỌKWA DỊ MKPA MAKA NDỤ GỊ!!!
AZỤKWANA ANỤ AHỤ IJIJI EBEGHỊ N’ELU!!! Owere ewu na ọkụkọ anya na ọkụ latrik na-abịazịrị anyị dịka ọbịa pụrụ iche. Maka nkea, ndi na-ere anụ ahụzịghị ọkụ ha ji-echekwa anụ ha refọrọ na ntụoyi. N’ihi ya ụfọdụ ndi isi agbọ ncha n’ime ha ka-ekwuru na jizi ọgwụ ahụ eji echekwaRead More →
AKA AKPARALA ‘DIBIA OYIBO’ OSO CHI EGBU
Aka ndi uwe ojii akparala otu nwoke kpọrọ onwe ya dibia oyibo na Legọs Nwokea dị afọ iri atọ na itolu ka-ekwuru na-onwere “ụlọ ọgwụ” na Mushin dị na steeti Lagọs. Ekwukwara na nwokea arụọla ọrụ ahụ-ike nke ijabua ihe dika afọ anọ. Tupu aka kpara ya, ọ na-elele ndiRead More →
TỤFỊAKWA!!! ỌKARA MMADỤ ỌKARA ANỤMANỤ NA-AKPA IKE NA MBA AJENTINA
Ụjọ na akpa ji ndi mmadụ na mba Ajentina. Ihe butere nkea bụ na enwere ihe enweghị ike ikpọ mmadụ nke eji akpọchaa anụmanụ nke pụtara ma na-atagbusị ụmụ mmadụ nakwa ụmụ anụmanụ na mba ahụ. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ọbụ n’obodo akpọrọ Santa Fe n’Ajentina ka ahụrụ iheaRead More →
ỤTỤTỤ/ABALỊ/ CHI( DAYBREAK)
ỤTỤTỤ/ABALỊ/ CHI( DAYBREAK)Read More →
NWIKORỌBỊA AMAGBUELA ENYI YA NWANYỊ MAKA NA-ỌJỤRỤ ITEPU IME
Otu nwikorọbịa aha ya bụ Ismail Nasiru dị afọ iri abụọ na atọ ka-ana ebo ebuboo na ọ magburu enyi ya nwanyị aha ya bụ Salamatu Garba dị afọ iri abụọ na abụọ na steeti Jigawa. Ọ bụ n’ọnwa atọ n’afọa bụ puku iri abụọ na iri na asatọ kaRead More →
OBI MGBAWA! NWATA NWANYỊ AHỤLA OZU ỤMỤ YA ABỤỌ N’IME NTỤOYI (FREEZER)
Ọbụ nnukwu ihe mgbawa obi na nne nwanyị gachara ihe lọta, wee hụ ozu ụmụaka ya nabọ ọ hapụrụ pụọ ka ha dọọrọ n’ime ntụ oyi (deep freezer). N’ụlọ akara ya bụ No. 6, Road 1 Eyin Ala, di n’Akure na steeti Ondo ka nnukwu ihe nhuju anyaa mere kaRead More →
IHE MBEREDE OKPORO ỤZỌ!
Ozi anyị siri steeti Kano nweta na-ekwu na mmadụ anọ nwụrụ pịị ebe mmadụ iri na itolu nwere mmerụ ahụ n’ụdị dị iche iche; n’ihe mberede ụgbọala mere n’okporo ụzọ si Kano gawa Bauchi. Ọbụ kpọm kwem na obodo ana-kpọ Dogon Danmarke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Wudil, na steetiRead More →
AKA ATỌỌLA NDI JI OTU AFỌ FEE ALA NNA HA MMANỤ AÑỤ MMANỤ AÑỤ NA STEETI IMO
Aka na-achị steeti Imo bụ Owelle Rochas Okorọcha enyela ikikere ka-enye ka ha ra bụ ndị jiri otu afọ fee ala nna ha na steeti Imo na afọa puku naira iri n’otu n’otu. Ndi nwere isi ọmaa dị otu puku mmadụ, na naari mmadụ ise na mmadụ iri anọ naRead More →
ỌHỊARead More →
ARỤ! ANWUCHIELA OTU NWOKE N’ELU ADA YA NWANYỊ
Otu nwoke di afọ iri anọ n’ise ka e jidere n’anya ọcha ebe ọ na-edina ada ya nwanyị. Enock Mweene, bụ nna mụgoro ụmụ asaa na mpaghara Southern Province nke mba Zambịya ka-e jidere n’anya ọcha n’izu ụka a mgbe ọ na-edina ada ya nwanyị. E kwuru na nwoke aRead More →
Na Yaba, dị na Legọs, ka ulọ ikpe majistrti nọrọ nye ikikere ka-akpọchie otu nwoke Denmak aha ya bụ Peter Nielsen maka na-ana-ama ya ime na-ogburu nwunye ya bụ Zainab nakwa nwa ha dị afọ atọ na ọkara, nke aha ya bụ Petra. Onye ọka-ikpe bụ ‘Chief Magistrate’ Kikelomo AyeyeRead More →
ỌGWỤGWỤ OGE: ONYE ISI ỤKA AMACHIELA ỤMỤ NWANYỊ IYI UWE ARAA NA ỌBANTE BỊA ỤKA
Na Kenya, otu onye isi ụka (Pastor) aha ya bụ Rev. Njohi nke ụlọ ụka Lord’s Propeller Redemption Church, dị na Dondora Phase 2, na Ọwụwa Anyanwụ Nairobi, amachiela ụmụ nwanyị na-abia ụka ahụ iyi uwe ara nakwa ọbante bịa ụka. N’uche ya,nke a ga- eme ka Kraist nweeRead More →
ỤMỤ NAỊJIRIYA BI NA UK EKWUOLA NA HA ACHỌGHỊ BỤHARỊ ỊZỌKWA ỌKWA ONYE ISI ALA ỌZỌ
Ụfọdụ n’ime ụmụ Naịjiriya bi na mba United Kingdom nọrọ na London kpọọ ganị ganị ụnyahụ bu Tuzdee megide mbọ onye isi ala anyị bụ Mohammadu Buhari na-agba ịlọghachite azụ dika onye isi ala n’afọ na-abịa abịa. Ebe a nọrọ mee ya bụ ngagharị iwe bụ nke akpọrọ Abuja HouseRead More →
ỤMỤ NIGERIA BI NA UK EKWUELA NA HA ACHỌGHỊ BUHARI IZỌKWA ỌKWA ONYE ISI ALA ỌZỌ
Ụfọdụ n’ime ụmụ Nigeria bi na United Kingdom nọrọ na London kpọọ ganị ganị ụnyahụ bu Tusdee megide ṅmbọ onye isi ala anyị bụ Mohammadu Buhari na-agba ịlọghachite azụ dika onye isi ala n’afọ na-abịa abịa. Ebe anọrọ kpọọ ganị-ganịa bụ nke akpọrọ Abuja House na London, bụ ebe onyiRead More →
EGWU DỊ NA STEETI EDO
Ahụ ịma jijiji ka anyị nụrụ na ọ dị n’Odighi dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Ovia North-East na steeti Edo. Ihe butere nke a bụ na-enwere kepu kepu na ndi nche ehi egbuela mmadụ abụọ n’obodo ahụ nke otu onye n’ime ha bụ onye isi ụka (pastor), aha ya bụRead More →
ADEBOYE ADỌKWAALA AKA NA NTỊ ỌZỌ MEGIDE ỊCHỌ DI NA NWUNYE N’ỌBA OZI IKUKU “SOCIAL MEDIA “
Onye isi ụlọ ụka akpọrọ Redeemed Christian Church of God, RCCG n’aha ịchafụ, bụ Ụkọchukwu Enoch Adeboye, adọkwaala aka na ntị ọzọ megide ịnọrọ n’ọba ozi’social media’ chọọ di ma ọ bụ nwunye. Ọ sịrị na ọ jọgburu udele ma sigbuo nkakwụ, mmadụ inọrọ n’ikuku chọọ onye ọ ga-alụ, na-ebughịRead More →
ADEBOYE ADỌKWALA AKA NA NTỊ ỌZỌ MEGIDE ỊCHỌ DI NA NWUNYE N’IKUKU
Onye isi ụlọ ụka akpọrọ Redeemed Christian Church of God, RCCG n’aha ịchafụ, bụ Pastor Enoch Adeboye, adọkwala aka na ntị ọzọ megide ṅịnọrọ n’ama ezụm-ezụ ọhaneze nke ikuku nwa bekee kpọrọ ‘social media’ chọọ di mọbụ nwunye. Ọ sịrị na ọ jọgburu udele ma sigbue nkakwụ, mmadụ inọrọ n’ikukuRead More →
admin on ỤLỌ/ỤZỌ
uju nwanekezie on ỤLỌ/ỤZỌ
Dọkịnta Achụkọ Nnamdị on ỤLỌ/ỤZỌ